Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Kuyajabulisa, angalindelekile, ngokubabazekayo, ukucabanga, awekho amagama anele okuchaza i- 7 izinkundla zebhola ezimangalisa kakhulu eYurophu. Ngaphezu kwalokho, noma ngabe ucabanga ukuthi ungabuqonda ubukhulu babo, kuphela uma ungena, ukuthi uyawuqonda impela umlingo. Ngakho, uma uyi…
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Izikhungo ezihehayo zedolobha elidala eYurophu ziyisibonelo esihle kakhulu samandla omlando waseYurophu. Izindlu ezincane, amasonto ababhishobhi ahlaba umxhwele maphakathi nedolobha, izigodlo ezigcinwe kahle, nezikwele ezimaphakathi, engeza kumlingo wamadolobha aseYurophu. le 5 endala ebukekayo kakhulu…
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Kunezincwadi ezingenakubalwa ezinamathiphu nezincomo zanoma yiluphi uhlobo lohambo oluya eYurophu, nanoma yiluphi uhlobo lokuhamba. Lezi zincwadi zokuqondisa zilungele ukufunda ngomlando namasiko, kodwa ngeke bakutshele ngamathiphu angaphakathi eYurophu. Ukuvakasha kokuhamba kwamahhala kumnandi…
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, ...
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Iziqongo zezintaba ezihlaba umxhwele, izigodi eziqhakazayo, izimpophoma, emachibini, nezilwane zasendle ezahlukahlukene, Ikhaya laseYurophu ezinqolobaneni zemvelo ezingenakulibaleka emhlabeni. Ukuchitha imali emazweni amakhulu aluhlaza aqhakaza entwasahlobo, 5 eziqiwini zemvelo ezinhle kakhulu eYurophu zivikelwe amapaki kazwelonke amukela abahambi abavela kuwo…